Ezilahlwayo Face Imaski Factory | KwiChina Abavelisi beMaski yokuBuso elahlwayo, Abaxhasi
Imibala emininzi yemibala emi-3 yoPhando lweMask
Isigqumathelo esenziwe ngophawu esilahlwayo kunye nesobuso seMaski ye-ASTM yenqanaba lesi-3 masks sibonelela ngesithintelo esingumaleko-3 somzimba ukukhusela lowo unxibileyo kulwelo, ungcoliseko, umungu, uthuli, kunye namanye amasuntswana omoya avavanywa ngeelebhu ezingama-98 zeBFE. Kwaye iimaski ezinobunzima bokuKhanya zakhiwe ngamalaphu angenalukhuni kunye nolusu oluthambileyo lwendlebe iiyure zokunxiba kakuhle.
Ukulahlwa kwaBantwana abaJongene neMaski Ukusetyenziswa kweMihla ngemihla
Aba bantwana bajongana nemaski ngocingo lwempumlo kunye neeMas zokuprinta zenziwe nge-100% yomqhaphu womgangatho weprimiyamu. Ke, zithambile ebusweni ngelixa zinceda ukukhusela umntu ozinxibileyo. Kwaye banika imbonakalo eyahlukileyo nefashoni ebantwaneni kubandakanya amakhwenkwe kunye namantombazana. Kwaye izaleko ezi-3 zempahla yelaphu yokuhluza inika ukhuseleko olusebenzayo.
Intengiso eshushu yeklasikhi ye-3 yomaleko wobuso bokuhlinzwa
Ezi maski zotyando zilahlwayo ziiLay 4 zePolypropylene Ultrasonically Welded Together: 3 Spunbond Polypropylene Layers Ngaphandle, 1 Meltblown Polypropylene Filter Layer Ngaphakathi. Kunye neList Twist Ear Loops Phambi kweNdlebe- okanye - Bopha iqhina kwiLops zeNdlebe ukufinyeza. Amanqanaba onyango ogqirha ogqirha ogqirha ziMaski zoPhononongo ezijolise kuKhuseleko lweSithintelo soTywala kunye nokubonelela: Ukusebenza kweBacterial Filtration (BFE): 99 +%.
Ukhuseleko loPhicotho zincwadi ezi-3 zoLuhlu ezilahlwayo zikhusela iimaski zobuso
Ulwaleko lobuso be-3 lwenziwe ngamanqanaba ama-3 elaphu elikumgangatho ophezulu elingalukanga; inefuthe lokucoca elinamandla kwaye ishushu kwaye iyaphefumla. Isikhuseli sokhuselo I-earloop e-elastic elula, i-loops eyongezelelweyo ethambileyo isusa uxinzelelo ezindlebeni. Uluhlu lwangaphakathi lwenziwe ngezicwili zobuso ezithambileyo, akukho dayi, ithambile kulusu.